Iinkqubo zokuguqula imifanekiso ibe yimizobo: ezona nkqubo zilungileyo | Abadali be-Intanethi
UNerea Morcillo | | Ukufota, ngokubanzi
Umthombo: Engadget Android
Ngombulelo ekudalweni kwabahleli bemifanekiso emininzi, kuye kwenzeka ukuba ujike umfanekiso ube ngumzekeliso omangalisayo. Okanye kunoko, kunokwenzeka ukuba sinokuzibona ngathi siyinxalenye yoluhlu lweekhathuni.
Esi siphumo se-avatar sinokwenzeka ngezinye zezixhobo esiza kukubonisa ngazo kule post. Ukuba ubungazi ukuba ungasifumana phi esi siphumo, Sikushiya uluhlu olude lwezixhobo onokuthi uzikhuphele okanye uziphendle kwaye ngale ndlela ufumane umzekeliso omhle ngomfanekiso owufunayo okanye owuthanda kakhulu.
1 Ezona nkqubo zilungileyo
1.1 Isitudiyo seefoto zobuGcisa bePics
1.3 Umhleli wePrism
1.4 Umenzi weefoto zeeKhathuni
Ezona nkqubo zilungileyo
Isitudiyo seefoto zobuGcisa bePics
I-Picsart yenye yoyilo loyilo lwedijithali kunye neenkqubo zokudala eziye, kule minyaka idlulileyo, yenye yezona zisetyenziswa kakhulu kude. Inoguqulelo lwasimahla kwaye, ukuba ufuna ukuzama ezinye iinketho zayo, unokuhlawula iindleko zenyanga kwaye wonwabele iimpawu zayo kunye nezixhobo.
Sisixhobo esifanelekileyo sokuhlela umfanekiso kunye nokudala ikholaji. Ukuba into oyithandayo kukufota kunye noyilo, ungayenza ngoku indawo kwikhompyuter yakho okanye kwifowuni ephathwayo.
I-Photolab ithathwa njengesixhobo sesibini sokuhlela umfanekiso osetyenziswa kakhulu kwihlabathi. Ungayikhuphela zombini kwiVenkile yePlay nakwiMac. Okufuneka ukwenze kukukhuphela kwaye ufake i-app.
Yintoni ebonakalisa i-Photolab yintlobo yezibonelelo ezinikezelayo. Nangona kunjalo, unokuhlawula ixabiso lenyanga ukuba ufuna ukonwabela ngokupheleleyo isicelo.
Ukuba, ukongeza kwifoto, uzinikele kwihlabathi loyilo, le nkqubo iya kuba nomdla kuwe kuba ikuvumela ukuba wenze zombini i-gradients kunye nokwenziwa kuyo yonke imisebenzi yakho. Nangona kunjalo, unokuzama iibhrashi zayo ezahlukeneyo kwaye ukhuthazwe ukwenza imizobo yoyilo kunye neyopopayi kwiiprojekthi zakho.
Umthombo: iiperile ze-APP
Umhleli wePrisma sesinye sezicelo ezibandakanya iziphumo kunye nokulawula ukutshintsha umfanekiso wakho ube ngumzobo wobugcisa kunye noyilo. Enkosi kwiintlobo ngeentlobo zeziphumo ezibonelelayo, ungawujika umfanekiso wakho ube ziintlobo ezininzi ukusuka kwimifanekiso yencwadi ehlekisayo enokwenzeka ukuya kwimifanekiso yobugcisa.
Kwakhona Iyafumaneka kuzo zombini i-Android kunye ne-iOS. Umhleli wePrisma ukwathathwa njengenye yezona zicelo zikhutshelweyo ngenyanga ngabasebenzisi abaninzi be-Intanethi.
Umenzi weefoto zeeKhathuni
Ifoto yeKhathuni yenye yezicelo ezilungele ukukhutshelwa kwiVenkile yoDlalo. Yintoni ebonakalisa olu setyenziso luluhlu lwezihluzi ezinikezelayo, ngale ndlela kuyenzeka ukuba zenze iicaricatures ezinokwenzeka.
Yintoni egqithisile. Ikwathathwa njengenye yezicelo onokufikelela ngazo ekudaleni ii-avatar zakho kunye nezomntu. Inye into ekufuneka uyikhumbule yeyokuba iintlobo ngeentlobo zokukhutshelwa ezifumana qho ngenyanga kwaye izimvo zayo ezintle zenza esi sicelo sibe nomtsalane ngakumbi.
I-BeFunky yenye yee-apps ezibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokucoca. Oku kuvumela ukuba utshintsho ukusuka kumfanekiso ukuya kumzobo lube yimpumelelo. Ukongeza, ineendlela ezahlukeneyo zokuzoba: ioyile, i-watercolor, njl.
Ngaphandle kwamathandabuzo yinto oyifunayo ukunika uchuku oluyilayo kwiifoto zakho.
Ipeyinti ngokungathandabuzekiyo sisixhobo seenkwenkwezi kwaye iyafumaneka kwi-iPhone. Ikwanayo negalari epheleleyo yezihluzi kwaye ineendleko zenyanga nezonyaka.
Yintoni ebonisa iPaint kwizixhobo zangaphambili, ngaphandle kwamathandabuzo, ukuba iphinda isebenze kunye nenketho ye-caricature, ekwavumela nendlela yobugcisa.
Ukuba uyingcali yokufota okanye ukuhlela umfanekiso, le nkqubo inokuba nomdla kakhulu kuwe. Ukongeza, unokusebenzisa isicatshulwa kwimifanekiso xa sele ibe yimifanekiso.
Njengoko ubonile, kukho amawaka kunye namawaka abahleli bemifanekiso onokuthi uguqule imifanekiso yakho ibe yimizobo. Ukongeza, le ngcamango ikrelekrele ayisebenzi nje kuphela ukusebenzisa icala lethu lobugcisa kodwa sinokuyisebenzisa ukuyila imizobo enokwenzeka okanye iifreyimu kwaye kamva siyinike abahlobo bethu, iqabane, usapho, njl.
Ukusebenza ngeenkqubo ezigcina i-beta okanye iinketho zohlelo lwasimahla kwenza kube lula ngakumbi ukusebenza nazo. Ngokungathi oko akwanelanga, banalo ujongano oluhle lobuchule.
Kwakhona, ukuba uluhlu lubonakala lufutshane, ungazama ezi nkqubo zilandelayo: i-Watercolor Effect, iPhotomania, i-Enlight, i-Optical Digital Flare kunye ne-toon me. Ezinye zazo zisimahla, ngelixa ezinye zifuna iindleko ezimfutshane kakhulu zenyanga okanye zonyaka.
Ngoku ixesha lifikile lokuba unike ubomi obuninzi kwimifanekiso yakho kwaye ukhuphe icala lokudala oliphethe ngaphakathi. Kufuneka nje ufumane umfanekiso owuthandayo okanye owufumeneyo ukhethekileyo kwaye uzame ezinye zeenkqubo esizicebisile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Iinkqubo zokuguqula imifanekiso ibe yimizobo